Tag: to-do-list | Martech Zone
Tag: lisitra tokony hatao
Zenkit: Tantano ny asanao manerana ny ekipa, fitaovana ary orinasa
Alatsinainy Martsa 16, 2020 Alakamisy, Aprily 1, 2021 Douglas Karr
Hatramin'ny naha-ofisialy ny fanidiana an'i Wunderlist, mpampiasa maro no nitady vahaolana haingana. An'arivony maro no efa naneho ny fahadisoam-panantenany amin'ireo safidy hafa ankehitriny, ka izany no nanapahan-kevitr'i Zenkit ny hampivelatra ny Zenkit To Do mba hahafahan'ireo mpampiasa Wunderlist mahatsiaro tena ho ao an-trano. Tsy kisendrasendra ny endrik'ilay fampiharana sy ny interface intuitive dia mitovy amin'ny Wunderlist. Ny fampiharana anio dia lisitra tsotra (toy ny Wunderlist, Todoist, na MS To Do) na fitantanana tetikasa sarotra
Ny raharaham-pikarohana teny
Alarobia, Febroary 6, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ity dia Sponsored Post. Miakatra avo dia avo ny sandan'ny motera fikarohana, tsy mahagaga raha mipoitra hatraiza hatraiza amin'ny Internet ny fitaovan'ny fikarohana. Mampiasa WordTracker ao amin'ny bilaogiko aho, satria tsotra satria manana plugin mora ampiasaina izy amin'ny fitadiavana ireo tag tsara indrindra ho an'ny hafatrao tsirairay. Fantatro fa ny SEOmoz dia manana teny fanalahidy vitsivitsy sy fehezanteny manan-danja ao anatin'ny fitaovan'ny atiny premium, tsy azoko atao ny manamarina ny fandaniana.